‘तट्बन्धनको नाममा उत्खनन् भयो’ स्थानिय, ठेकेदार भन्छन् : ‘नियम मिचेका छैनौ’ – कामना डेली
‘तट्बन्धनको नाममा उत्खनन् भयो’ स्थानिय, ठेकेदार भन्छन् : ‘नियम मिचेका छैनौ’
On २०७७ बैशाख १६, मंगलवार २०:१३ Last updated Apr 28, 2020
टेकबहादुर पुन, दाङ । गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने राप्ती नदिका किनारमा तट्बन्धन गर्ने कार्य धमाधम् जारी छन् ।
गाउँपालिकाको पुर्बी सिमाना वडा नम्बर १ बनघुस्री र मलमला गाउँको राप्ती दोभानमा पनि तट्बन्धन कार्य जारी छ । लकडाउनको मौका छोपेर ठेकेदार कम्पनीले मापदण्ड बिपरित तट्बन्धन कार्य जारी राखेको स्थानियले अारोप लगाएका छन् । जालीको प्वाल भन्दा साना ढुङ्गा भरेर जाली बाँध्ने काम भईरहेको स्थानिय महेन्द्र कुमालले गुणासो गरे । “बर्षाको समयमा पानीको बहाबसँग ठोक्किदा ढुँगा बग्ने स्थिति अाउन सक्छ, जसले गर्दा तट्बन्धनको जाली खुकुलो बन्छ कुमालले भने-सम्बन्धित निकायको ध्यान जावस् ।” सम्बन्धित ठेकेदारले तट्बन्धनको वारीपारीबाट उत्खनन् गरी ढुङ्गापनि निकाली रहेका छन् । उक्त ढुङ्गा तट्बन्धनमै प्रयोग गर्नेभनि उत्खनन् गरिएको ठेकेदार हरु बताउँछन् । तट्बन्धनकै छेउँछाउँ बाट उत्खनन् गरिदिँदा निर्माण संरचना कमसल हुने र बर्षामा भत्किन सक्ने स्थानियले बताए । जमिन खुकुलो भएपछि तट्बन्धन भत्किन के बेर? एक स्थानियले भने-फेरी यो उत्खनन् कार्य नियम बिपरित छ । कम्पनीका सम्बन्धित ठेकेदार हरुले ढुङ्गा अभाबका कारण उत्खनन् गरिएको बताउछन् । तर उत्खनन्का लागी उनिहरुले गढवा गाउँपालिका र प्रगन्ना बड्कापथ सिचाई अायोजना लमही सँग कुनै किसिमको समन्वय भने गरेका छैनन् ।
प्रगन्ना बड्कापथ सिचाई अायोजना लमहीका सुचना अधिकारी उमेश गुप्ता भन्छन्-जालीमा साना ठुला दुबै किसिमका ढुङ्गा परेका छन्, सकेसम्म प्वाँल भन्दा ठुला साईजका ढुङ्गा राख्ने हो तर त्यहाँ ढुङ्गाको अभाबले यो सब भएको हो । उनले उत्खनन्का बारेमा भने सम्बन्धित कम्पनीले कार्यालयमा जानकारी नदिएको जनाए । “कम्पनिले उत्खनन् बारे कुनै किसिमको समन्वय गरेको छैन, लकडाउनका कारण अनुगमनमा पनि सधैजसो जान सकिएको छैन सुचना अधिकारी गुप्ताले भने-यसैको मौकामा ठेकेदारले गलत पनि गरेको हुन सक्लान् तर उत्खनन् भने हामिले तत्काल बन्द गराएका छौँ ।” उनले अनुगमनमा जाँदा अाबस्यक भन्दा गहिरो खाडल देखिए कारबाही हुने पनि स्पष्ट पारे ।
उता गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादबले अाफ्नै गाउँपालिकाको योजनाको अनुगमन गर्नुपर्ने हुँदा गौरबको योजनामा त्यति समय नभएको बताउँछन् । अाफ्नै पालिका अन्तरगतमा भईरहेका सम्पुर्ण बिकाश निर्माणका कामहरुको अनुगमन गर्ने स्थानिय सरकारको पनि दायित्व भित्र पर्छ । तर अध्यक्ष यादबले तट्बन्धनको लागि १ पटक पनि अनुगमनमा नगएको बताउँछन् । उत्खनन्का बारे गाउँपालिका सँगपनि समन्वय नगरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष यादबले अब भने अनुगमनमा जाने जानकारी दिए । सम्बन्धित कम्पनिका ठेकेदारले कर छली गरि उत्खनन् गरिरहेको अर्का स्थानिय दिपेन्द्र देब श्रेष्ठले बताए । “उत्खनन्का लागि अाबस्यक प्रक्रिया होलान्, तर मनोमानी छ, सम्बन्धित निकायलाई थाहा छैन श्रेष्ठले भने-जो कोहीले पनि कर छली गर्न पाउँदैन, मनोमानी बन्द गरियोस ।” घरको प्रयोगको लागि १ ट्रेक्टर नदिजन्य पदार्थ ल्याउँदा अाँखा पर्ने सम्बन्धित निकायको मनपरि उत्खनन् गरेर दिनदहाडै ढुङ्गा निकाल्दा पनि कहाँ निदाए? उनले अाक्रोस् पोखे । कम्पनि त निर्माण कार्य सकेर अन्तै जाने हो, यहाँको बिपत त हामी स्थानियले भोग्नुपर्छ तसर्थ निर्माण कार्य मजबुत बनोस् भनेर हामी लागेका छौँ तर सम्बन्धित निकायले खासै चासो दिएन श्रेष्ठले गुनासो गरे ।
उता सम्बन्धित कम्पनिका ठेकेदार हरुले यो सब ब्यक्तिगत रिसईबि हुन सक्ने बताउँछन् । तट्बन्धन् कार्य जति सम्पन्न भएका छन् ती सबै नियम सम्बत काम भएका छन्, स्थानियले भनेजस्तो नियम बिपरित काम नभएको उनिहरुको भनाई छ । प्रगन्ना बड्कापथ सिचाई अायोजना लमहीका प्राबिधिक टोली प्रायजसो अनुगमनमा अाउने र उहाँहरुले भने बमोजिम् नै नियम सम्बत काम भईरहेको कम्पनिको भनाई छ । ३ वटा स्काभेटर र टिप्परले त्यहाँ काम गरिरहेका छन् । सरकारले लकडाउनको समयमा ३ जना भन्दा बढि भिडभाडमा नरहने निर्देशन दिएपनि त्यहाँ दैनिक २५ देखि ३० जना मजदुरहरुले काम गरिरहेका देखिन्छन् ।
नेपाल सरकारको भ्याट बाहेक १४ करोड ५० लाख रुपैयामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरि जलजला जय माँ स्वर्गद्वारी घोराही दाङ्गले तट्बन्धनको काम गरिरहेको छ ।
नेकपा विवादः हस्ताक्षर अभियानको विपक्षमा टोपबहादुर रायमाझी
आज हालसम्मकै धेरै २०२० जनामा कोरोना पुष्टि,कहाँ कति थपिए संक्रमित ?
प्रदेश ५ का ६ अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने
नम्बर नखुलेको गाडीको ठक्करबाट दाङमा एक जनाको मृत्यु
राष्ट्रिय भावको गीत ‘नेपाल प्यारो छ’ सार्वजनिक (भिडियो)
संविधान दिवसमा नेपाल टेलिकमले दियो यस्तो अफर
महाराजगंज सब–स्टेशन संचालनमा